I-skateboard entsha yokuguqula i-slag blocking ephuhliswe ngu-Fangming e-Zhengzhou ifumene isigunyaziso selungelo elilodwa lomenzi
I-Zhengzhou Fangming High-Temperature Ubushushu beCeramics New Material Co, Ltd. iphuhlise iindlela ezimbini zokuthintela isilayidi zendlela yokuguqula i-slag: isisombululo esichasene nesinyithi sinyibilikisa isilayidi kunye nomzimba ochaseneyo oxinzelelekileyo kwisilayidi sokufuduka, esafumana ukugunyazwa kwelungelo elilodwa lomenzi. Imbovane ...
I-Fang Ming-Solution-proof swirl slide esetyenziswe kumatshini wokumisa isixhobo se-slag
I-Zhengzhou Fangming High-Temperature Ceramic New Material Co, Ltd iphuhlisile kwaye yafaka ezi zinto zimbini zilandelayo zokumisa izixhobo ze-slag zokusetyenziswa kwesiguquli se-slag yokumisa kunye nokufumana ukugunyazwa kwelungelo elilodwa lomenzi.
I-Zhengzhou Fangming Ubushushu obuphezulu beCeramic New Material Co, Ltd. (emva koku ebizwa ngokuba yi "Fangming NewM") ibiphucula kwaye iguqula imeko yemveliso kunye nezixhobo zemveliso phantse iminyaka emithathu, kwaye ifake uninzi lwe-dev yokuqokelela uthuli oluphambili. ..
Imfezeko sisidima sesintu samaTshayina, isiseko seshishini, ikwayinto ebalulekileyo ekusindeni nasekuphuhlisweni kweshishini. Kule mihla yoqoqosho lwehlabathi, ukhuphiswano kuzo zonke iifayili zobomi luya lusiba mandundu. Kuphela ...
UMeyi uSuku lwaBasebenzi, olwaziwa njengo “Meyi 1st Int'l Labor Day” okanye “uSuku lwaBasebenzi lwaMazwe ngaMazwe okanye uSuku lukaCanzibe”, yenye yeholide yesizwe kumazwe angaphezu kwama-80 emhlabeni. Ukuseta ngoMeyi 1 ngonyaka ngamnye. Ngumthendeleko omnye ekwabelwana ngawo ngokudibeneyo ngokusebenza kwabantu bonke ...
I-Fangming NewM izakuzimasa i-16th China Int'l Refractories kunye noMboniso weeCeramics zoShishino
ngomphathi ku 20-02-28
I-Zhengzhou Fangming Ubushushu obuphezulu beCeramic New Material Co, Ltd. Ind ...
I-Zhengzhou FangMing Ubushushu obuPhezulu boMbane oMsha Co., Ltd.
I-Zhengzhou FangMing Ubushushu obuPhezulu boMbane oMtsha Co., Ltd. -Rare-Earth oxide SS yodongwe iThermal Field efakwe kwiSapphire Crystal Grower-Ukuphela komenzi onobuchule onamalungelo epropathi azimeleyo epatent. I-sapphire ibizwa ngokuba yi-corundum, kwaye eyona com ...